‘छोरी जन्माउने सबै पापी हुन्, म पापी बुबा हुँ’:: Naya Nepal
‘छोरी जन्माउने सबै पापी हुन्, म पापी बुबा हुँ’
प्रताप ओली, बझाङ: बझाङमा बलात्कारपछि हत्या गरिएकी १२ वर्षिया सम्झना कामीका बुवा बिकास भारतबाट आएका छन्। भारतबाट आएदेखि बिकास चैनपुरस्थित एक सानो बन्द कोठाभित्र छन्।
जतिखेर पनि आँखाभरि आँशु आइरहन्छन्। रुँदै भन्दै थिए ‘छोरी जन्माउने सबै बुबा पापी हुन् । म पनि पापी बुबा हुँ। तीन हप्ता अगाडी मेरी छोरीले त्यताबाट स्यान्डल ल्याइदिनु है बाबा भनेकी थिइ। स्थानीय शेर कामी दाइको हातमा स्यान्डल पठाएको थिएँ। मैले पठाएका स्यान्डल पनि नलगाइ छोडेर गइ मेरी छोरी। फूलजस्ती छोरी त्यो पापीले चटक्कै चुँडेर लग्यो। उसका कति सपना थिए सबै अधुरै रहे। छोरीलाई नदेखेको ४ वर्ष पुग्यो।’
छोरीको बलात्कारी र हत्यारालाई कि त फाँसी कि त आजिवन जेलमा सडाए मात्रै मेरि छोरीले न्याय पाउँछ भन्दै छाती पिटिपिटी रोइरहन्छन् विकास।
सम्झना १२ वर्षीया जेठी छोरी हुन्। त्यसपछि ४ बहिनी र एक भाइ छन् सम्झनाका। सम्झनासहित तीन बहिनी बाजे बज्यैसँग थिए भने दुई बहिनी र एक भाइ भारतमा बुबा आमासँग थिए । विकास गाउँमा गरिखाने वातावरण नहुँदा २०५८ सालमा भारत छिरेका थिए। त्यसपछि एउटा छोरीको आँखामा समस्या आउँदा धेरै खर्च भयो तर आँखा काम नलाग्ने गरी बिग्रीयो। दुखै दुखले भरिएको विकासको जीवनमा दैवले ठूलो ब्रजपात पारिदियो। फूलको कोपिला जस्तै फक्रिन लागेकी सम्झना बुबा र भाइलाई नदेख्न पाएर यो संसारबाट विदा भइन्।
सम्झनाका लागि विकासका शब्द:
“माफ गर्नू छोरी, म सबैभन्दा ठूलो अपराधी हुँ। मैले नै कसैले बलात्कार गरोस्, कसैले निर्मम तरिकाले हत्या गरोस् भनेर तँलाई जन्माएको रहेछु। त्यो मन्दिरभित्रको देवता जानोस्। मेरी छोरी त्यो पापीले थिचिकुटी बलात्कार गरेर मा¥यो। मन्दिरभित्र मेरी छोरी कति रोई होली ?
कति चोटि त ए बाबा, ए आमा भनी होली तर म त उसको त्यो चिच्याहट सुन्ने अवस्थामा थिइनँ। म कसरी भनूँ ? के मैले आफ्नी छोरी घरमा बुबाआमासँग राख्न नपाइने हो ? के मैले त्यो पापीको सुन चोरेर ल्याएको थिएँ र मेरी छोरीको सुन लुट्न यत्रो दुस्साहस ग¥यो ?
सरकार ! छोरीका लागि न्याय दिलाइ दे, होइन भने मेरो नागरिकता बुझाइदिन्छु। मलाई देशनिकाला गरिदे। यदि म यो देशको नागरिक हुँ, मेरी छोरीको लुटपाट, बलात्कार र हत्या हुँदा अपराधीलाई फासी हुने कानुन बनाइ दे। हामी बुबा पापी भइसक्यौँ, अब त अति भो। छोरीचेलीको जीवनलीला सकिन लाग्यो। अपराधी खुलेआम गाउँघरमा डुल्न थाले। हामी गरिब, दीनदुःखीका आवाज सुन्ने को छ ? हाम्रो रगत/पसिनाको महत्त्व बुझ्ने को छ ?
मेरी छोरीको हत्यारा राजेन्द्र बोहरा नै हो। ऊ यदि हत्यारा होइन भने मेरी छोरीलाई मार्नुभन्दा एक हप्ताअगाडि ’कानका मुन्द्रा दे’ किन भन्यो ? किन मेरी छोरीलाई धम्क्यायो ?
उसका अघिल्ला अपराध पनि धेरै छन्। मेरै घरभन्दा पल्लो घरकी एक बालिकालाई पनि उसले बलात्कार गरेर ‘बच्चा बसे म जिम्मा लिन्छु’ भन्दै कागज गरेर ५ सय रुपैयाँ दिएर घटना थामथुम पारेको छ। त्यो नरपिचासबाहेक मेरी छोरीको हत्यारा अरु कोही हुन सक्दैन। त्यसलाई प्रहरीले बाहिर निकालोस् न मात्र, जनकारबाही गर्छौं हामी। विकास गाउँमा गरिखाने वातावरण नहुँदा २०५८ सालमा भारत छिरेका थिए।
त्यसपछि एउटा छोरीको आँखामा समस्या आउँदा धेरै खर्च गरे, तर आँखा काम नलाग्ने गरी बिग्रियो। दुःखैदुःखले भरिएको विकासको जीवनमा दैवले ठूलो वज्रपात पारिदियो। फूलको कोपिलाजस्तै फक्रिन लागेकी सीताले बुबा र भाइलाई देख्नै नपाई संसारबाट बिदा भइन्।”
सुदूरपश्चिममा जघन्य अपराधका घटना गाउँघरमै सामसूम पारिदा दण्डहिनता मौलायो
धनगढीः गत बुधबार बझाङको मष्टा गाउँपालिका वडा नम्बर २ की १२ वर्षीया बालिका सम्झना कामी बलात्कारपछि हत्या गरेको अवस्थामा घरभन्दा झण्डै दुई किलोमिटर टाढा सिम मन्दिर भेटिईन्। अर्धनग्न अवस्थामा सम्झनाको शव फेला परेपछि स्थानीयले प्रहरीलाई खबर गरेका थिए।
घटनाको अनुसन्धानका क्रममा बलात्कारपछि हत्या गरेको आशंकामा सोही ठाउँका अन्दाजी १८ वर्षीय राजेन्द्र बोहोरालाई नियन्त्रणमा लियो। बोहोरालाई नियन्त्रणमा लिएको हप्ता दिन नबित्दै गत साउनमा समेत उनले गाउँकै १४ वर्षीय बालिकामाथि बलात्कार गरेको घटना सार्वजनिक भयो। तर उक्त घटना स्थानीय जनप्रतिनिधि र नागरिक अगुवाकै रहोबरमा घटना मिलापत्र गरिएको खुलेको छ।
सम्झनाको बलात्कारपछि हत्या गर्नुको उपज यसअघिको घटनामा मिलापत्र गरिनु नै रहेको अपीडित पक्षले बताएका छन्। ‘त्यो घटना गाउँमै नमिलाएको भए अहिले अपराधी बोहोरा जेलमा हुन्थे। सम्झनामाथि कुदृष्टि लगाउन पाउने थिएन।’ मृतक सम्झनाका काका बलम बिसी भन्छन्, ‘तर उसलाई कारवाहीको दायरामा नल्याउँदा नानुको बलात्कारपछि हत्यो गरे।’
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र नागरिक अगुवाको रहोबरमा यसअघिको बालिकामाथि भएको बलात्कारको घटनामा मिलापत्र गरिएको भएपनि अहिले जनप्रतिनिधि बेखबर जस्तै बनेका छन्। वडा स्तरमै वडाध्यक्ष सहितका पाँच जना जनप्रतिनिधि भएपनि उक्त घटनाका विषयमा यसपूर्व कुनै जानकारी नभएको दावी गरिएको छ।
मष्टा गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष भगवती बोहोराले सम्झनाको बलात्कारपछि हत्या गरिएको घटना सार्वजनिक भएपछि मात्रै पूरानो घटनामा मिलापत्र गरिएको कुरा थाहा पाएको दावी गरिन्। ‘यसअघि गाउँमै घटना मिलाईयो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा थिएन। जब सम्म्झनाको हत्या भयो, ती व्यक्ति पक्राउ परे त्यसपछि मात्रै जानकारी पायौँ।’ उनले भनिन्।
तर सम्झनाको बलात्कारपछि हत्या गरेको आरोपमा पक्राउ परेका राजेन्द्र बोहोरा विरुद्ध गाउँमै मिलापत्र गरिएको घटनाको समेत किटानी जाहेरी परेको प्रहरीले जनाएको छ। सम्झना हत्या प्रकरणसँगै यसअघि १४ वर्षीया बालिकामाथि जबरजस्तीकरणी गरिएको घटनाको समेत अनुसन्धान भईरहेको छ।
आरोपी बोहोरालाई प्रहरीले मंगलबार सार्वजनिक गरेको छ। दुवै घटनाको गम्भीर रुपमा अनुसन्धान भईरहेकाले मिलापत्र गर्ने/गराउने जोसुकैलाई पनि कारवाहीको दायरामा ल्याईने बझाङका प्रमुख प्रहरी नायब उपरिक्षक रुपक खड्काले बताए। ‘जघन्य अपराधका घटना गाउँघरमै मिलापत्र गराउँन पाईदैन्।’ उनले भने, ‘हामी त्यो विषयमा अनुसन्धान गरिरहेका छौँ। घटना मिलाउने मतियारलाई पनि कारवाहीको दायरामा ल्याउँछौँ।’
बझाङको प्रतिनिधिमुलक उदाहारण भएपनि सुदूरपश्चिममा अहिले पनि जघन्य अपराधका घटना गाउँघरमै ढाकछोप गर्ने प्रवृत्ति रोकिएको छैन्। निर्वाचित जनप्रतिनिधी र गाउँघरका टाठाबाठा व्यक्तिहरुले अपराध ढाकछोपममा भूमिका खेल्दा दण्डहीनता मौलाएपछि हत्या, हिंसा, बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधका घटना बढ्न थालेका छन्।
तर स्थानीय प्रशासनलाई घटनामा संलग्न मात्र नभएर ढाकछोप गर्नेहरुलाई समेत कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग गरिएको छ। अधिवक्ता रेणुप्रधान श्रेष्ठले जघन्य प्रकृतिका अपराधलाई लकुाउने सबैलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन आवश्यक रहेको बताईन्।
‘कानूनले समेत हत्या, हिंसा, बलात्कार जस्ता जघन्य प्रकृतिका घटनामा मिलापत्र गर्न नपाउँने व्यवस्था गरेको छ’ उनले भनिन्, ‘तर समाजमा यो क्रम नरोकिदा दण्डहिनताले प्रशय पाउँदैछ। घटना मिलाउने जोसुकै भएपनि कारवाही हुनुपर्छ। अपराध ढाकछोप गर्न पाईदैन्।’
प्रहरी समेत जघन्य अपराधका घटना गाउँघरमै मिलापत्र गर्ने प्रवृत्ति नरोकिदा अपराध नियन्त्रणमा चुनौती थपिदै गएको बताउँदै आएको छ। त्यस्ता घटना गाउँघरमै मिलाउँदा झन ठुला घटना निम्तिएका उदाहरणहरुलाई दृष्टिगत गरी जनचेतना फैलाउने तथा घटना लुकाउने व्यक्तिलाई समेत कारवाहीको दायरामा ल्याउने कार्यमा प्रहरी कटिबद्ध रहेको दावी गरिएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रहरी वरिष्ठ उपरिक्षक मुकेशकुमार सिहले जघन्य अपराधका घटना गाउँघरमै मिलापत्र गरिएको घटनालाई गम्भीरमा लिईएको बताए। उनले जनचेतना फैलाउँनेदेखि त्यस्ता कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याईने बताए।
तर कतिपय अवस्थामा कानून कार्यान्वयन र अपराध नियन्त्रणको जिम्मेवारी पाएको प्रहरी समेत जघन्य प्रकृतिका अपराधका घटना ढाकछोप गर्न लाग्ने गरेको आरोप खेप्ने गरेको छ। प्रहरीकै संरक्षणमा अपराध हुने प्रवृत्तिले समेत अपराधिक मनोवृत्ति भएका व्यक्तिहरुले जरा गाड्दै गएकाले त्यसतर्फ समेत प्रहरी प्रशासन सचेत र सजग रहनुपर्ने सुझाव सरोकारवालाहरुले दिएका छन्।